Myanmar Deitta | UNEARTH
24th November - 19th December 2015 | Tues - Sat | 10am - 5pm
Opening reception: Saturday 21st November, 5pm - 9pm
Opening reception ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီ မှ ၉နာရီထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
In July and August 2015, six photographers documented Myanmar’s diverse and highly lucrative extractive industries sector. The photographers followed stories throughout the country, including the illicit jade trade from northern Myanmar’s Kachin State, the aftermath of government crackdowns on protests against the controversial Letpadaung copper mine in Sagaing Region and the tapping of onshore oil reserves along the banks of the Irrawaddy River.
ဓါတ်ပုံဆရာ ၆ ယောက်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ တလျားရှိ လွန်စွာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနေသော တွင်းထွက်သယံဇာတာ အရင်းအမြစ် တူးဖေါ်ရေး လုပ်ငန်း များဖြစ်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း မှ ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ရေးမှသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ရှိ လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးများမှ ရေနံတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများအစရှိသော တွင်းထွက်တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း ၆ခုကို ၂၀၁၅ ဇူလိုင် နှင့် သြဂုတ်လများတွင် သွားရောက် မှတ်တမ်းတင် ပုံဖေါ်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။
The six stories, commissioned and supported by the Natural Resource Governance Institute (NRGI), will be used to inform officials, industry professionals and the wider public about some of the issues faced in the extractive industries, as well as the communities affected by projects. Exploitation of natural resources in Myanmar has long been associated with corruption, environmental destruction and oppression of the civilian population. While Myanmar was accepted as candidate country to the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and is preparing its first report, independent documentation, research and analysis of its extractive industries sector remains essential and complementary to this effort. The implementation of EITI, as well as much-needed broader reforms, will hopefully lead toamore transparent, responsible and accountable industry.
NRGI (Natural Resource Governance Institute) မှ အဓိက ထောက်ပံ့ကူညီမှု ဖြင့်ဖြစ်မြောက်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သော အဆိုပါ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ဇာတ်လမ်း၆ပုဒ်သည်အဘက်ဘက်မှတာဝန်ရှိသူများ၊အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသောကျွမ်းကျင်သူများကိုအသိပေးနိုင်ရန်နှင့်အဆိုပါတွင်းထွက်တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောပြသနာများကိုလူထုပိုမိုသိရှိစေရန်၊ထိုလုပ်ငန်းများရှိရာဒေသများရှိကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရသောဒေသခံလူထုပိုသိသိရှိနားလည်သဘောပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့နေရသော သဘာဝတွင်းထွက် ထုတ်လုပ်မှု ခေါင်းပုံဖြတ်မှုပြသနာသည် အဂတိလိုက်စားခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်း နှင့် ဒေသခံပြည်သူများအပေါ်ဖိနှိပ်ခြင်းတို့ နှင့် လုံးဝဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တွင်းထွက်သယံဇာတ အရင်းအမြစ် တူးဖော်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်လောင်းနိုင်ငံ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလည်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး အတွက် ပထမဆုံး မှတ်တမ်းကို ပြင်ဆင်နေလျက်ရှိရာ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှလည်း ၄င်းတွင်းထွက်တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်ယှဉ်းသော လွတ်လပ်ပြီးဘက်မလိုက်သော မှတ်တမ်းများ၊သုသေသနများကို တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ မဖြစ်မနေ ပြုစုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ တွင်းထွက်သယံဇာတ အရင်းအမြစ် တူးဖော်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီးပိုမိုပြီးပွင်းလင်းမြင်သာသော၊တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိသော တွင်းထွက်တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
This project and exhibition were made possible by the support of the Natural Resource Governance Institute.
Unearth Project နှင့် ဓါတ်ပုံပြပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် NRGI မှထောက်ပံ့ ကူညီပေးထားပါသည်။
Minzayar | Myanmar
Lauren DeCicca | USA
Andre Malerba | USA
Suthep Kritsanavarin | Thailand
Matt Grace | UK